🥇 Nyocha maka ngwaahịa anụ ụlọ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 725
Video nke aza ajụjụ maka Emechara anụ ụlọ ngwaahịa
Nye iwu maka ịkọ ụgwọ maka anụ ụlọ emechara
Gụ ajụjụ maka ngwaahịa anụ ụlọ mechara bụrụ usoro dị mkpa na azụmaahịa ọrụ ugbo. Site na nhazi ahaziri nke ọma, ịnwere ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa mepụtara ma n'otu oge ahụ belata mmefu nke ịchekwa anụ ụlọ na anụ ọkụkọ, yana ọnụ ahịa nke ngwaahịa ndị a natara. Iji jikwaa ọrụ ndị dị otú ahụ, ọ dị mkpa iwebata teknụzụ ọhụrụ na ngwaahịa anụ ụlọ na-aza ajụjụ, yana ngwa ọrụ ọhụụ na iji mmepe teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Anụ ụlọ dị ka ngalaba akụ na ụba dị mgbagwoju anya chọrọ usoro ọhụụ iji debe ndekọ - akpaghị aka.
O zughi ezu naanị ịgụ ngwaahịa ndị emechara. Maka omume azụmaahịa dị irè, ọ dị mkpa idozi nsogbu nke ịhazi njikwa mma kwesịrị ekwesị, yana ịmepụta ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka nchekwa na nhazi. Ngwaahịa anụ ụlọ ga-adịrịrị ọhụrụ nye onye na-azụ ya. A ga-ebugara ndị ahịa ngwaahịa ahụ n'oge ma soro ya na akwụkwọ niile dị mkpa, gụnyere asambodo anụmanụ na akwụkwọ. Usoro ndị a niile bụ ọrụ nke onye mepụtara ya. Ma ọ ga-adị mfe, ngwa ngwa, ma rụọ ọrụ nke ọma iji dozie ha na akpaghị aka ajụjụ.
Typedị anụmanụ ọ bụla nwere njirimara nke ya mgbe ha na-aza ajụjụ maka ngwaahịa emechara. Dịka ọmụmaatụ, na ịzụlite anụ ehi, a ghaghị iburu uru a n'uche - mmụba nke oke nke anụmanụ ọ bụla na anụ ụlọ. Ndị ọrụ kwesịrị ị na-atụle anụmanụ mgbe niile ma dekọọ data nke na-enyere aka ịkọ ọkwa nke ngwaahịa emechara - anụ, na oke ziri ezi. Ugbo mmiri ara ehi na-edekọ ihe ndekọ nke mmiri ara ehi. Maka ugbo n'ozuzu ya na maka ehi ọ bụla ma ọ bụ ewu, karịsịa, a na-edekọ ọtụtụ mmiri ara ehi dị njikere maka nhazi na ire ere. N'ụlọ ọrụ ọkụkọ, a na-agụ akwa - a na-agụ ha iche iche site na otu na ụdị dị iche iche. Ndị na-azụ atụrụ na-edekọ ajị anụ na anụ e nwetara site na anụ ụlọ, ebe a na-edozigharị ihe ndị rụchara n'egbughị oge. N’ime alaka ụlọ ọrụ ụmụ anụmanụ dịka ịkpa a beeụ, a na-edekọ achị a beeụ na mmanụ a obtainedụ ha nwetara.
Nchịkọta akụkọ a haziri ahazi nke ngwaahịa dị njikere maka ire ere na-egosi nrịgo na ala, mbelata ma ọ bụ mmụba na ike. Ihe omuma di otua na enyere aka ichota ihe bu nsogbu a, imata ihe ndi metutara nbelata nke onu ogugu nke ngwaahịa. N'iji ihe omuma di otua, o sighi ike ichota uzo esi edozi nsogbu ndia.
Ngwaahịa sitere na ndị na-azụ anụ ụlọ na-aga n'ụlọ nkwakọba ihe ngwongwo, ma ebe ahụ ọ dị mkpa iji hụ nnabata ziri ezi, akwụkwọ ederede, adreesị adresị dịka ihe ndị achọrọ maka ịdị adị nke ngwaahịa ọ bụla, na ire ere. Mbupute nke ngwaahịa na nnyefe ha na ndị na-azụ ahịa kwesịkwara ịdekọ. Ihe omume a haziri ahazi nke ọma ga - enyere aka ịkwalite ire ahịa ka ịghara ikwe ka ngwongwo zuru ezu ma ọ bụ ụkọ ngwaahịa zuru ezu n'ụlọ nkwakọba ihe.
A gụchara ma chịkwaa anụ ụlọ ndị a gụchara. Mana maka ebumnuche a, ị ga-ejupụta ọtụtụ nkwupụta, akwụkwọ, na akwụkwọ ndekọ ego. Naanị otu ndudue n'amaghị ụma na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-eduga na nyocha na atụmatụ na-ezighi ezi, njehie buru ibu na-eduga na mfu ego. Ọ bụ ya mere ndị ọchụnta ego na ndị ọrụ ugbo nke oge a ji na-achọkarị ịdebe ndekọ nke ngwongwo zuru ezu site na anụ ụlọ na-eji sistemụ ozi.
Ndị mmepe nke USU Software emeela mmemme na-eme ka ọ dịkwuo mkpa maka mkpa anụ ụlọ. N'ime ya, ị nwere ike ọ bụghị naanị n'ụzọ ziri ezi na ịdebe mmiri ara ehi natara, anụ, ajị anụ, kamakwa idozi ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ịme nyocha na nyocha nke usoro ego, gbanye ọrụ nke ụlọ nkwakọba ihe ma bulie ya nchekwa, na-achịkwa omume ndị ọrụ, na-eme atụmatụ mmefu ego. Usoro ihe omume a na-azọpụta ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ site na mkpa dejupụta akwụkwọ na ide akụkọ. Akwụkwọ niile dị mkpa maka ịkọ ajụjụ, a na-emepụta akụkọ na-akpaghị aka.
Sọftụwia ahụ gosipụtara etu esi eji arụ ọrụ rụọ ọrụ nke ọma, otu ihe si aga na ire ere ngwaahịa agwụla. Ọbụna ma ọ bụrụ na ire ahịa ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ, usoro ahụ ga - enyere aka na nke a - site na enyemaka ya ị nwere ike ịchọta ndị ahịa ọhụrụ, ndị na-eweta ngwaahịa, wulite usoro pụrụ iche nke mmekọrịta ha na ha. Akụrụngwa ahụ na-enyere aka ịgbakọ ọnụahịa nke ngwaahịa dabere na data mbụ ha - ogo, ọkwa, na otu ngwaahịa. Ihe omume a gbakọọ ọnụahịa maka ngwaahịa anụmanụ ọ bụla ma gosipụta ihe sitere na ya mepụta. Nke a na - enyere gị aka ịchọta ọnọdụ kacha mma ị ga - aza, gbanwee omume ndị na-ebelata mmefu nke imepụta ngwaahịa. Onye njikwa ahụ ga-enwe ike ịnweta site na ngwanrọ ngwanrọ eziokwu na ntụkwasị obi ọ bụghị naanị maka ngwaahịa dị njikere maka ọrịre kamakwa maka usoro nke mmepụta ha.
Usoro ihe omume nke ndị ọkachamara anyị nyere nwere ike ịme ngwa ngwa maka mkpa nke otu ugbo. Ọ bụrụ na onye njikwa ahụ na-ezube ịgbasa ma ọ bụ webata akara ngwaahịa ọhụrụ, mgbe ahụ mmemme ahụ agaghị emepụta mgbochi nke usoro - enwere ike ịbawanye ya na nha nke ụlọ ọrụ ọ bụla ma nwee ike igbo mkpa nke ụlọ ọrụ abụọ na nnukwu ụlọ ọrụ, nke obere ụlọ ọrụ nwere ike bụrụ oge na-aga site na ị na-aza ajụjụ ọkachamara zuru oke.
Na ihe niile a, usoro ihe omume nwere a doro anya interface na ngwa ngwa mmalite n'ime usoro. Site na obere nkuzi mmeghe nke ndị ọrụ, ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ anụmanụ na-azụ ya. Mgbe ọtụtụ ndị ọrụ na-agba ọsọ n'otu oge ahụ, ọ nweghị ihe ọghọm n'ihi interface multi-user.
Usoro ihe omume a ga-arụ ọrụ ziri ezi na ngwa ngwa nke akụkụ dị iche iche nke ugbo, ngọngọ mmepụta, nkewa ụlọ ọrụ n'otu netwọkụ ozi ụlọ ọrụ. Maka ngalaba ọ bụla, isi ga-enwe ike ịdekọ ndekọ nke ngwaahịa ndị emechara, yana jikwaa usoro ndị ọzọ niile. Mgbanwe nke ozi dị n’etiti ndị ọrụ na-aghọ ọsọsọ, ọbụlagodi na nkewa nke ugbo ahụ dị anya na ibe ya.
Sọftụwia ahụ na - enye gị ohere iburu n'uche ngwa ahịa anụ ụlọ ndị rụchara site na otu dị iche iche - aha, ụbọchị nrụpụta, klaasị, otu, ibu, ọnụahịa, ụgwọ, ndụ adịghị, na akụkụ ndị ọzọ. Ngwa anyị na-egosi ọnụọgụ nke ịnweta ngwaahịa n'aka onye ọ bụla n'ime anụ ụlọ. Nwere ike ịkọpụta mkpụrụ mmiri ara ehi kwa ehi ma ọ bụ ajị anụ kwa atụrụ. Nke a na - enyere aka n’idozi nsogbu nrụpụta ọrụ site na itinye otu ụzọ n’otu esi nri, ilekọta, na ịgwọ anụmanụ. Ndebanye aha nke ngwaahịa anụ ụlọ kwesịrị ịrụ ozugbo. Ọrụ nke ndị ọrụ n'okwu a dị ntakịrị, ya mere data ahụ ga-abụ ntụkwasị obi mgbe niile.
A ga-etinye usoro ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ n'ọrụ n'oge ọ bụla. USU Software na-egosi ndị ọkachamara mgbe na anụmanụ na-achọ ịgba ọgwụ mgbochi, nyocha, nyocha, ma ọ bụ ọgwụgwọ. Maka anụmanụ ọ bụla, sistemụ a na-enye usoro ọgwụgwọ anụmanụ niile emere.
Usoro a ga - echekwa ihe ndekọ na ndebanye aha nke ụmụ na ọnwụ na anụ ụlọ. Onye njikwa ahụ n'oge ọ bụla ga-enwe ike ịnweta ozi ziri ezi banyere ọnụọgụ anụ ụlọ, na-echebara ndị amụrụ na ndị mechara.
USU Software na-ewepụ nsogbu nke ndekọ ndị ọrụ. Ọ ga-anakọta ma nye njikwa ahụ ọnụ ọgụgụ zuru oke na onye ọrụ ọ bụla, gosi etu onye ọrụ ahụ si dị irè ma baa uru. Dabere na data ndị dị otú ahụ, nke kachasị mma nwere ike ịkwụghachi ụgwọ ezi uche dị na ya, nke kachasị njọ - ọ dịkarịrị obere akwụ ụgwọ. Maka ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka anụmanụ anụmanụ n'ọnọdụ ọnọdụ, sọftụwia nwere ike gbakọọ ụgwọ ọrụ na akpaghị aka.
Njikwa n'ụlọ nkwakọba ihe na-akpaghị aka. Nnata nke ngwaahịa na ngwaahịa anụmanụ nke emechara, ma dị njikere maka ire ere ga-edebanye aha na akpaghị aka. A na-egosipụta ngagharị niile nke ngwaahịa na ọnụ ọgụgụ ozugbo, nke a na-eme ka nyocha nke itule, na nkwekọrịta nke ngwa ahịa. Usoro a na-enye ngwa ọrụ maka imefu akụ na ụba, ma dọọ aka na ntị maka ụkọ ngwaahịa ga-ekwe omume, na-enye iji mejupụta ebuka n'oge.
Ihe omume a nwere ihe nhazi puru iche nke emere n’oge. Ọ na - enyere aka ịmebe atụmatụ ọ bụla, debe akara ngosi dị mkpa, ma buru n'uche nsonaazụ dị n'etiti iji nweta ihe mgbaru ọsọ. USU Software ga-edebe ndekọ nke nnata ego na mmefu niile, yana igosi nkọwa na njirimara nke usoro ego, na-enyere onye ndu aka ịhụ ụzọ iji bulie mmefu ụlọ ọrụ. Usoro a na-egosi ụdị ngwaahịa ngwaahịa a dị na nnukwu mkpa. Nke a na-enyere aka ịhazi ọrụ mmepụta, duzie mgbasa ozi, yana ahịa.
Enwere ike ijikọ usoro a na ngwa nkwukọrịta nke oge a - yana telephony, weebụsaịtị, igwefoto CCTV, azụmaahịa na akụrụngwa nkwakọba ihe. Nke a na - enyere aka idebe ihe ndekọ nke ngwongwo emechara, kpọọ ha, bipụta aha, ma na - enye aka iwulite mmekọrịta siri ike na ndị mmekọ na-aga n'ihu
Usoro ihe omume ahụ na-emepụta ọdụ data bara uru nke ndị ahịa, ndị mmekọ, na ndị na-eweta ngwaahịa. Ha ga-agụnye ozi gbasara mkpa, ozi ịkpọtụrụ, yana akụkọ ihe mere eme nke imekọ ihe ọnụ.
Emepụtara ngwa mkpanaka pụrụ iche maka ndị ọrụ na ndị mmekọ oge niile, yana ndị njikwa nwere ahụmịhe ọ bụla. Akaụntụ na-ntukwasi-obi na-echebe paswọọdụ. Onye ọrụ ọ bụla na-enweta ozi na sistemụ naanị dabere na mpaghara ya. Usoro a na-enyere aka ịchebe ihe nzuzo azụmaahịa. Enwere ike ibudata ụdị ngosi ngosi nke ngwa ngwa maka ebe nrụọrụ weebụ anyị.